Imfazwe Namhlanje—Ngaba Iya Kuze Ithetheleleke?
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI Cakchiquel (Western) ISepedi ISidama ISilozi ISpanish Isi-Iban Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAcholi IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAymara IsiBaoule IsiBatak (SaseToba) IsiBhulu IsiBulgarian IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiChitonga IsiChitumbuka IsiChiyao IsiChokwe IsiChol IsiCibemba IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFiji IsiFinnish IsiFrentshi IsiGa IsiGeorgia IsiGreenland IsiGrike IsiGuarani IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHmong (White) IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiJavanese IsiKaren (SaseS'gaw) IsiKazakh IsiKikamba IsiKikaonde IsiKikongo IsiKikuyu IsiKiluba IsiKimbundu IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKiribati IsiKirundi IsiKisi IsiKisonge IsiKongo IsiKorea IsiKrio IsiKwangali IsiKwanyama IsiLamba IsiLhukonzo IsiLingala IsiLithuania IsiLuganda IsiLuo IsiLuvale IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMaltese IsiMam IsiMaya IsiMazatec (sesiHuautla) IsiMoore IsiMyanmar IsiNahuatl (saseGuerrero) IsiNahuatl (saseHuasteca) IsiNdebele IsiNdebele (saseZimbabwe) IsiNdonga IsiNgabere IsiNgesi IsiNorway IsiNyaneka IsiNzema IsiOssetia IsiOtetela IsiPapiamento (saseAruba) IsiPapiamento (saseCuraçao) IsiPhuthukezi IsiPidgin (SaseCameroon) IsiPolish IsiQuechua (saseBolivia) IsiQuichua (SaseImbabura) IsiRashiya IsiRomania IsiRunyankore IsiSamoa IsiSango IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSranantongo IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwahili (saseCongo) IsiSwedish IsiTagalog IsiTahiti IsiTatar IsiTetun Dili IsiThai IsiTigrinya IsiTlapanec IsiTojolabal IsiTok Pisin IsiTotonac IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTshiluba IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTuvaluan IsiTwi IsiTzotzil IsiUkrainian IsiUmbundu IsiUrdu IsiVenda IsiVietnam IsiWayuunaiki IsiXhosa IsiYoruba IsiZande IsiZulu isi-Igbo isiZapotec (saseIsthmus)
Nanamhlanje abantu basacinezelwe. Abaninzi bakhala kuThixo ngokungapheziyo becela ukuhlangulwa yaye bezibuza ukuba uya kuze abancede kusini na. Ngaba uThixo uyaziva izikhalo zabo? Kuthekani ngabo babhenela kwimfazwe ukuze baphelise ingcinezelo? Ngaba uThixo uyayixhasa, eyijonga njengefanelekileyo imfazwe yabo?
IArmagedon iya kuba yimfazwe yokuphelisa zonke iimfazwe
Okokuqala, umele uthuthuzelwe kukwazi ukuba: UThixo uyayibona intlungu abakuyo abantu namhlanje, kwaye uzimisele ukwenza into ngayo. (INdumiso 72:13, 14) ELizwini lakhe iBhayibhile, uThixo uthembisa ukuba abo ‘babandezelwayo, uza kubakhulula.’ Nini? “Ekutyhilekeni kweNkosi uYesu ivela ezulwini kunye neengelosi zayo ezinamandla . . . ibaphindezela abo bangamaziyo uThixo nabo bangazithobeliyo iindaba ezilungileyo ezingeNkosi yethu uYesu.” (2 Tesalonika 1:7, 8) Esi siganeko siza kwenzeka kungekudala, iBhayibhile isibiza ngokuba yimfazwe yemini enkulu kaThixo uSomandla,’ esikwabizwa ngokuba yiArmagedon.—ISityhilelo 16:14, 16.
UThixo uza kusebenzisa kungekhona abantu kodwa uNyana wakhe uYesu Kristu, nezinye izidalwa ezinamandla zasezulwini ukulwa loo mfazwe nabangendawo. Umkhosi wasezulwini uza kuyiphelisa nya ingcinezelo.—Isaya 11:4; ISityhilelo 19:11-16.
Imbono kaThixo ngemfazwe ayikatshintshi nanamhlanje. Usayibona iyindlela efanelekileyo yokuphelisa ingcinezelo nokubandezeleka. Kodwa njengoko kwakunjalo mandulo, isenguThixo kuphela ogqiba kwelokuba iza kuliwa nini kwaye ngubani imfazwe. Njengoko sesibonile, uThixo sele egqibile ukuba imfazwe eza kuphelisa ingcinezelo nobungendawo iseza, ibe iza kuliwa nguNyana wakhe uYesu Kristu. Oku kuthetha ukuba iimfazwe eziqhubekayo namhlanje aziqhubeki ngemvume kaThixo kungakhathaliseki ukuba abo balwayo bathi balwela injongo elunge kangakanani.
Ngokomzekelo: Khawube nomfanekiso ngqondweni wamakhwenkwe amabini esilwa ngoxa uyise engekho. Okomzuzwana ayayeka ukulwa aze awe emnxebeni efowunela uyise. Enye yala makhwenkwe ima ngelithi iqaliwe, ngoxa enye isithi ibixhatshazwa. Omabini akhala kuyise, kuba nganye kuwo icinga ukuba uza kuthatha icala layo. Noko ke, emva kokuba ewavile omabini, uyise uwayalela ukuba ayeke ukulwa aze amlinde abuye ukuze ayilungise le ngxabano. La makhwenkwe ayayeka ukulwa okomzuzwana. Kodwa akubi kudala, aphind’ aqale phantsi. Xa efika ekhaya, uyise akayithandi le nto ayenzileyo aze awohlwaye omabini ngokungamthobeli.
Namhlanje, amazwe alwayo adla ngokucela inkxaso kuThixo. Kodwa uThixo akathath’ icala kwiimfazwe zanamhlanje. Kunoko, kwiLizwi lakhe iBhayibhile utsho phandle ukuba: “Musani ukubuyisela ububi ngobubi nakubani na,” yaye “musani ukuziphindezelela, zintanda.” (Roma 12:17, 19) Ngaphezu koko, ufuna abantu ‘balindele kuye ngomonde’ ukuze alungise, nto leyo aza kuyenza eArmagedon. (INdumiso 37:7) UThixo akathandi xa iintlanga zibhenela kwizigalo kunokuba zilindele kuye ukuba alungise izinto. Sekunjalo, eArmagedon, uThixo uza kuphalaza ingqumbo yakhe aze azinzise imbambano yeentlanga ngonaphakade ‘ngokuphelisa iimfazwe kuse esiphelweni somhlaba.’ (INdumiso 46:9; Isaya 34:2) Ngokwenene, iArmagedon iya kuba yimfazwe yokuphelisa zonke iimfazwe.
Ukuphela kweemfazwe yenye yeentsikelelo ezininzi eziza kuziswa buBukumkani bukaThixo. UYesu wayethetha ngalo rhulumente kumthandazo wakhe odumileyo xa wathi: “Mabufike ubukumkani bakho. Makwenzeke ukuthanda kwakho nasemhlabeni, njengasezulwini.” (Mateyu 6:10) UBukumkani bukaThixo abuzi kuphelisa imfazwe nje kuphela kodwa buza kumsiphula neengcambu unobangela weemfazwe, ubungendawo. * (INdumiso 37:9, 10, 14, 15) Yiloo nto abalandeli bakaYesu bekhangele phambili kwiintsikelelo zoBukumkani bukaThixo.—2 Petros 3:13.
Simele silinde ixesha elingakanani, ngaphambi kokuba uBukumkani bukaThixo buphelise iintlungu, ingcinezelo nobungendawo? Inzaliseko yeziprofeto zeBhayibhile ibonisa ukuba siphila ‘kwimihla yokugqibela.’ (2 Timoti 3:1-5) * Kungekudala, uBukumkani bukaThixo buza kuyiphelisa le mihla yokugqibela ngemfazwe yeArmagedon.
Njengoko besele sitshilo, abo baza kutshatyalaliswa kule mfazwe yokugqibela ngabo baye ‘abazithobela iindaba ezilungileyo ezingeNkosi yethu uYesu.’ (2 Tesalonika 1:8) Kodwa khumbula ukuba uThixo akakuthandi ukufa kwakhe nabani na, kuquka nabangendawo. (Hezekile 33:11) Ekubeni ‘enganqweneli ukuba kutshabalale nabani na’ kule mfazwe yokugqibela, uyaqinisekisa ukuba ngoku iindaba ezilungileyo ngeNkosi uYesu ‘ziyashunyayelwa kuwo wonke umhlaba omiweyo ukuze zibe bubungqina kuzo zonke iintlanga.’ (2 Petros 3:8, 9; Mateyu 24:14; 1 Timoti 2:3, 4) Umsebenzi wokushumayela owenziwa ehlabathini jikelele namhlanje, unika abantu ithuba lokwazi uThixo, ukuthobela iindaba ezilungileyo ezingoYesu, nokuphila bade babone xa iimfazwe ziza kube zingasekho.
^ isiqe. 9 UBukumkani bukaThixo buza kuphelisa olona tshaba lwabantu, ukufa. Njengokuba inqaku elithi “Iimpendulo Zemibuzo YeBhayibhile” lisitsho, uThixo uza kuvusa inyambalala yabantu, abaquka nabo baye babulawa ezimfazweni ukutyhubela imbali.
^ isiqe. 10 Ukuze ufumane inkcazelo engakumbi ngemihla yokugqibela, funda isahluko 9 sencwadi ethi Yintoni Ngokwenene Efundiswa YiBhayibhile? epapashwe ngamaNgqina kaYehova.
IBhayibhile isichazela ntoni ngemfazwe eyaliwa ezulwini kunye nemfazwe yehlabathi eyabangela iingxaki emhlabeni?